Kuze kube manje, jelly ingenye kophudingi ethandwa kakhulu okulungiselelwe usebenzisa gelatin. Kungaba lunikezwe njengendlela dish ehlukile, ukukhonza njengephayona umhlobiso amakhekhe namakhekhe, kanye ingasetshenziswa ukudala ezihlukahlukene bobunjwa, ezifana ezitshalweni nasezilwaneni. Njalo umpheki uyazi ukuthi angalenza kanjani jelly, nalabo ababhekene nalo okokuqala, kufanele ulandele abanye amathiphu namasu ubuciko ukukhiqizwa yayo.
Lokhu dessert ingalungiswa kusuka izithelo kokubili fresh futhi eqandisiwe kanye amajikijolo, ayo kanye kumasayiraphu, sezimoto noma ubisi ne ukwengeza gelatin noma agar-agar. Lezi izidakamizwa ingcina-like ngaphambi kokwenza jelly, udinga i-cwilisa for isigamu sehora emanzini, bese kuqalwa ukwakha dessert. Kulokhu jelly uzilungiselele ngezindlela ezihlukahlukene, okuyinto, ngemuva Ukupholisa yayo, kwehlisa emanzini ashisayo bese ezinyakaziswayo ukuba jelly akuyona sikhubazekile bese zisakazwa izitsha okuphekwe.
Udinga ukwazi ezinye supply imithetho dessert. Ngakho, izithelo jelly wakhonza ukhilimu nobisi jelly - ne izithelo isiraphu. Endabeni ngokungeza gelatin izithelo, kufanele kube fake usike. Dessert ligcinwe ngaso okushisa afinyelela ku-degree 14 ngosuku olulodwa.
Ngaphambi kokwenza jelly kusukela gelatin, udinga ukuqonda ukuthi yini yena ngokwakhe nokuthi ingabe kunezinye, esikhundleni imfuyo yayo.
Gelatin iwumkhiqizo ehlanganisa amathambo omile futhi ochotshoziwe imisipha kwezilwane. Uma usebenzisa lokhu thickener kuyadingeka ukuze ngokucacile unamathele imiyalelo jelly nokulungiselela.
Enye imfuyo ingcina-like kuyinto pectin, eliwumkhiqizo yemifino, + ngakho-dessert kusheshe yokuzigxilisa ngisho ashisa kakhulu. Ekugcineni, agar-agar iwumkhiqizo kwakhiwa kusuka ulwelwe futhi kuyinto polysaccharide. Kunconywa ngaphambi kokwenza jelly usebenzisa agar, ukuhlola impahla yayo ingcina-like, njengoba izinga yayo ingase ibe khona ehlukile.
Ngakho, jelly akuyona kuphela dessert esiphundu, kodwa futhi ine eziningi izakhiwo ezuzisayo. Ukusetshenziswa Its kuba nomphumela omuhle enethambo bese uqwanga uhlelo lomuntu. pectin wayo abalekeleli ubonisa umzimba lead nezinye izinsimbi ezisindayo, kanye ne-agar-agar kuvusa wendlala yabesilisa, kusiza ahlanze umzimba ubuthi.
Cabanga ngesibonelo sika- indlela yokwenza jelly ikhekhe.
Ngenxa yale njongo, kudingeka isigamu inkomishi ushukela oluyimpuphu namanzi, isigamu isipuni gelatin, amaconsi ambalwa kalamula ithisipuni elilodwa iwayini.
Okokuqala, kubalulekile ukuba cwilisa gelatin emanzini amahora ambalwa, bese ufaka oluyimpuphu noshukela, kalamula futhi imenze ethumbeni, isidingo umphumela ususe Foam. Ngemuva kwemizuzu engu-eziningana umhluzi abilayo ukuze kuphole ekamelweni lokushisa bese wengeza iwayini ukudla upende. Jelly selehlile is batheleka isikhunta futhi ubeke endaweni epholile kuze solidification ephelele. Umkhiqizo osuphelile ingasetshenziswa njengendlela umhlobiso amaqebelengwane futhi ukwakha kuwo ikhekhe uqobo. Kulesi jelly ikhekhe wathela ushokoledi unheated nihlobise ezihlukahlukene uphole.
Abaningi babonakala ezithakazelisayo indlela yokwenza jelly yetiye. Ukuze wenze lokhu, thatha itiye, izithelo zakho ozithandayo, noshukela nolamula. Kulokhu, zonke izithako kunezelwa ukunambitheka. Gelatin ofakwe ngokulandela imiyalelo on the isembozo. I itiye eqinile ungeze kalamula, ushukela kanye gelatin. Sika izithelo wathela itiye selehlile phansi ubeke endaweni epholile yokuzigxilisa.
Ngakho, ukuze uthole jelly esiphundu, yengezwe kalamula noma iwayini. Khetha izitsha ukulungiswa le dessert akufanele aluminium kusukela kungaba lula yokufuna ezingemnandi ukunambitheka jelly.
Ukunamathela zonke imithetho kanye namathiphu wokulungiselela kophudingi, ungathola isidlo esihlwabusayo wabe esethi enhle eziyothokozisa ukupheka hhayi kuphela, kodwa yathinta nayo yonke izivakashi zayo.
Indlela ukupheka dolma - iresiphi for ukhukhuva abasha
Yini ukupheka eyodla ehlobo? Hash - ukhetho best!
Indlela ushayele uMary Othanda Ukuchitha Igazi: isixwayiso futhi umhlahlandlela esenzweni
Wayengubani heroes umalume Pushkin sika inganekwane?
Indlela yokufunda ukwenza i-moonwalk? Izinyathelo ezinhlanu zokufunda
Ukwehla kwesibindi se-lumbar spine - kuyini? Izimbangela, Izimpawu Nezokwelapha
Anti-cellulite massage amabhange